degmada Wadajir:Howl gal lagu soo qabtay hub iyo waxyaabaha maanka dooriya oo ka dhacay – idalenews.com
degmada Wadajir:Howl gal lagu soo qabtay hub iyo waxyaabaha maanka dooriya oo ka dhacay
Ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa howl gal xalay ay ka sameeyeen qeybo ka mid ah xaafadaha degmada Wadajir ku soo qabtay hub iyo waxyaabaha maanka dooriya.
Ciidamada ayaa gacanta ku soo dhigay labo qori oo ah AK47 iyo labo bastoolad oo la sheegay in lagu dhibaateyn jiray shacabka, sidoo kale waxyaabaha maanka dooriya sida xashiish iyo qamri ayaa ka mid ahaa.
Guddoomiye kuxigeenka Siyaasadda iyo Amniga Gobolka Banaadir Maxamed Tuulax, Saraakiil ka tirsan Booliska iyo Guddoomiyaha degmada Wadajir ayaa goobjoog ka ahaa goob saxaafada loogu soo bandhigay waxyaabaha lagu soo qabtay howlgalka.
Afhayeenka Gobolka Banaadir C/fataax Xalane ayaa sheegay in howl galkan uu ahaa mid qorsheysan oo lagu soo qabtay waxyaabo lid ku ahaa amniga, waxaa uu xusay in dadkii degenaa guriga laga soo helay hubka iyo waxyaabaha maanka dooriya la horgeyn doono sharciga.
Fahfaahin ka soo baxeyso kulan xaley dhaxmaray Xildhibaanada ka soo horjeeda Mooshinka Guddoomiye Jawaari